‘आफ्नै पार्टीका मन्त्रीलाई पनि निर्देशन दिनसक्छु’ - Himalkhabar.com
अन्तर्वार्ता/विचारसोमबार, भाद्र १६, २०७१
‘आफ्नै पार्टीका मन्त्रीलाई पनि निर्देशन दिनसक्छु’
११ भदौमा व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको सभापति चयन भएकी रञ्जुकुमारी झासँग गरिएको कुराकानीः
महिला, बालबालिका समितिको सभापतिको जिम्मेवारी पाउँदा कस्तो लागेको छ ?
पहिलो पटक सभासद् भएकी मैले सभापतिको जिम्मेवारी पाउनु महत्वपूर्ण अवसर हो । यो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्नेमा विश्वस्त छु ।
तपाईंलाई यो जिम्मेवारी किन दिइएको होला ?
महिला आन्दोलन र पार्टी जीवन दुवैमा मेरो दुई दशकभन्दा लामो आबद्धता छ । म कानूनी पृष्ठभूमिबाट आएकी हुँ । सभासद् भएयताको मेरो कार्यशैली सबैले देखेका छन् । यो अवसर पाउनुमा मेरो योग्यता र योगदान दुवैले काम गरेको छ भन्ने लाग्छ ।
समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने योजना के के छन् ?
संसद्को सफलता वा असफलता मिनी संसद् भनिने संसदीय समितिमा निर्भर गर्दछ । समितिलाई सफल बनाउन सदस्यहरू र संसद् सचिवालयसँगको ‘टीमवर्क’मा जोड दिनेछु । सामाजिक, राजनीतिक जीवनका अनुभवलाई समितिको कार्यसम्पादनमा लगाउने छु ।
समितिका सभापतिले अर्को पार्टीका मन्त्रीले गरेका काममा मात्रै कडिकडाउ गर्छन् भन्ने छ नि ?
पार्टीले चार सभापति पाएकोमा आफ्नो पार्टीका मन्त्री नभएको समिति लिएको छ । शतप्रतिशत निष्पक्ष नभए पनि पार्टीगत आधारमा मन्त्रीमाथि भेदभाव गर्दिनँ । आफ्नै पार्टीका मन्त्रीलाई पनि सभापतिको हैसियतले निर्देशन दिने र छलफलमा बोलाउने ल्याकत ममा छ ।
संसदीय समितिको सभापति र संविधानसभा सदस्यमध्ये कुन भूमिकालाई महत्व दिनुहुन्छ ?
दुवै भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । तर सभापति चार वर्षका लागि हो भने संविधान माघ भित्रै बनाइसक्नुपर्नेछ । तसर्थ पहिलो ६ महीना संविधानसभाको भूमिकालाई जोड दिनेछु । समिति र संविधानसभाका कामहरू पनि एकअर्कालाई सघाउ पुर्‍याउने खालकै छन् ।